I-Downtown Conil ngasolwandle - I-Airbnb
I-Downtown Conil ngasolwandle
Conil de la Frontera, Andalucía, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Mónica
Isitudiyo esisha sha enhliziyweni kaConil. Kukhanya, kuthokomele futhi kusanda kwakhiwa. Inekhishi elinesiqandisi. Umbhede ophindwe kabili onethezekile, usofa, itafula nomabonakude. Indlu yokugezela yesimanje kanye negumbi lokugqoka lapho ungashiya khona umthwalo wakho ngama-hangers kanye nesifuba sabadwebi.
Ngaphezu kokuba iphansi eliphansi, iyakwazi ukufinyelela ithafa enokubukwa kolwandle eduze kolunye ucwaningo.
Ine-air conditioning ne-wifi.
Ogwini lolwandle, imigoqo, izindawo zokuphuza, izitolo ezinkulu, izitolo ... Kuhle ukukhohlwa ngemoto.
Ngaphezu kwakho konke, izivakashi ziyayithanda indawo. Imaphakathi neConil, emgwaqeni eduze kwezindawo zokucima ukoma kodwa ngesikhathi esifanayo iwumgwaqo onabantu abambalwa futhi othule kakhulu. Futhi ukuhamba imizuzu emibili ukusuka ogwini!
Bathanda futhi ukwakheka kwendawo yesitudiyo kanye nemibono enikezwa ithala.
ubusuku obungu-7 e- Conil de la Frontera
4.79 · 125 okushiwo abanye
Kuthulekile endaweni. Kuwo lo mgwaqo kunesuphamakethe.
Uma ushiya umgwaqo ngakwesokunene, ufica iCalle del Peñón, eyehlela ngqo ogwini lolwandle futhi ingomunye wemigwaqo ephithizelayo nedume kakhulu ehlobo, ngenxa yokugcwala kwayo ezindaweni zokucima ukoma nama-cocktail bars.
Ngithanda ukusebenzela izivakashi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze zingibuze ku-airbnb noma zifinyelele kimi ngocingo noma ngomlayezo wombhalo (noma ngabe yini eziyithandayo).
Ngesikhathi sokufika ngihlale ngizama ukuba khona ukuze nginikeze okhiye ngihlangane nabo mathupha. Ngiyathanda ukubachazela izinto ezithile mayelana nocwaningo futhi nginikeze usizo lwami uma bedinga noma yiluphi uhlobo lwesiqondiso noma iseluleko (kungaba ngaleso sikhathi noma phakathi nokuhlala kwabo).
Ngithanda ukusebenzela izivakashi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze zingibuze ku-airbnb noma zifinyelele kimi ngocingo noma ngomlayezo wombhalo (noma ngabe yini eziyithandayo)…
Inombolo yepholisi: CTC-2019 569321
Hlola ezinye izinketho ezise- Conil de la Frontera namaphethelo